peeraporn y. – Myanmar Live
Myanmar Live News Myanmarlivenews
Author: peeraporn y.
လူနေမှုပုံစံ / ဗေဒင်
၇ ရက်သားသမီးဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာလ ၁၂-၁၈ ရက်ထိ
September 24, 2020 September 24, 2020 - by peeraporn y.
တနင်္ဂနွေသား/သမီး အလုပ်အကိုင်အဆင်ပြေမည် အတားအဆီးအနည်ငယ်ရှိမည် အေးအေးဆေးဆေးဖြေရှင်းနိုင်မည်။ ငွေရေးကြေးရေးပြေလည်မည် အထစ်အငေါ့မရှိပါ မထင်မှတ်ဘဲလာဘ်ဝင်ကိန်းရှိသည်။ လူလွတ်များ လာရောက်ချဉ်းကပ်သူများတသဲသဲရှိနေမည် အချိန်ယူပြီးအကဲခတ်ပါ။ …
၇ ရက်သားသမီးဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာလ ၁၉-၂၅ ရက်ထိ
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အလုပ်မန်နေဂျာမှသင့်ကို မျက်စိဒေါင်ထောက်စောင့်ကြည့်နေတာကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း စိတ်ဖိစီးရမယ်။ စိတ်အေးအေးထားပြီးလုပ် မပေါ့ဆပါနဲ့ ငွေကြေးအလားလာကောင်းမယ် ငွေဝင်လမ်းပေါများမယ်။ …
၇ ရက်သားသမီးဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာလ ၅-၁၁ ရက်ထိ
တနင်္ဂနွေသား/သမီး အချစ်ရေးပေါ်လွင်ထင်ရှားမည်။ လက်တွဲဖေါ်မှသင့်ကိုအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးလိမ့်မယ် နှစ်ဦးအတူပူးတွဲလုပ်ကိုင် ပါက လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအောင်မြင်ကြီးပွားမည် ၀င်ငွေကောင်းပြီး ငွေကြေးအလားအလာ ကောင်းမည်။ ငွေကြေးပြဿနာ …
၇ ရက်သားသမီးဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက် – အောက်တိုဘာလ ၄ ရက်ထိ
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အလုပ်အကိုင်နှင့်ပတ်သက်ပြီး သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ရင် အောင်မြင်ကျော်ကြားမည်။ ရွေးချယ်စရာအလုပ် တွေများလွန်းတာကြောင့် ဆုံးဖြတ်ရလက်နေမည် ငွေကြေးအတည်တကျဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငွေကိုချင့်ချိန်သုံးစွဲပါ …
အပတ်စဉ် ဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၂၁-၂၇ စက်တင်ဘာ ၂ဝ၂ဝ
September 14, 2020 September 14, 2020 - by peeraporn y.
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အလုပ်နဲ့သက်ဆိုင်တာမှန်သမျှကိုအဖွဲ့နှင့်ညီညီညာညာလုပ်သင့်တယ် လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် များနဲ့စကားများကိန်း ရှိနိုင်တယ် ငွေကြေးအလွန့်အကျွံသုံးမိတာကြောင့်ငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ် မလိုအပ် တာတွေကို လျော့ပါ ချစ်သူစုံတွဲတွေရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့မိမိရဲ့ …
အပတ်စဉ် ဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၁၄-၂ဝ စက်တင်ဘာ ၂ဝ၂ဝ
တနင်္ဂနွေသား/သမီးများ တနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားတဲ့သူတွေဟာ အတွေ့အကြုံအသစ်တွေ ဘဝအပြောင်းအလဲအ သစ်တွေနဲ့ကြုံ ကိန်းရှိပါတယ် ဒါပေမဲ့ အထူးသတိထားရမှာကတော့ အခြားသူတွေနဲ့ ယှဉ်လျင် …
ရက်သားသမီးဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာလ ၇-၁၃ ရက်ထိ
September 1, 2020 September 1, 2020 - by peeraporn y.
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ငြိမ်သက်နေလိမ့်မယ်။ ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေမညီမျှတာကြောင့် စိတ်သောကရောက်ရမယ်။ အိမ်ထောင်သည်များရဲ့အချစ်ရေးသာယာဖြောင့်ဖြူးမယ် လူလွတ်များ ဆက်လက်အထီးကျန်ရဦးမယ်။ ယတြာ : …
ရက်သားသမီးဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၂၀၂၀ သြဂုတ်လ ၃၁ မှ စက်တင်ဘာ ၆ ရက်ထိ
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါများမယ် တိုးတတ်အောင်မြင်မယ် ငွေကိုစနစ်တစ်ကျစီမံခန့်ခွဲပါ တရားမဝင်တဲ့နည်းလမ်းနှင့် ဆက်နွယ်နေတဲ့ ရင်းနှီးမှုမှန်သမျှရှောင်ကြဉ်ပါ ချစ်သူရည်းစားရှိသူများ အချစ်ခံရလွန်းတာကြောင့်မွန်းကျပ်ရမည်။ ယတြာ …
၇ ရက်သားသမီးဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၂၀၂၀ သြဂုတ်လ ၂၄-၃၀ ရက်ထိ
August 24, 2020 August 24, 2020 - by peeraporn y.
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များနဲ့ အတိုက်ခံဖြစ်ရမယ် တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးလေးစားမှုရှိစွာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ပါ ငွေကြေးဥစ္စာနှင့်ပတ်သက်လို့ ကြွေးမြီများနှင့်ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်။ အချိန်အနည်းငယ်တောင့်ခံပြီးရင်ဆိုင်သွားပါက ကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမယ်။ …
၇ ရက်သားသမီးဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၂၀၂၀ သြဂုတ်လ ၁၇-၂၃ ရက်ထိ
August 17, 2020 August 17, 2020 - by peeraporn y.
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အလုပ်တွေအရင်ကထက်များပြီး လက်မလည်ဖြစ်နေမယ် လက်တစ်လောငွေဝင်လမ်းပေါများနေတာကြောင့် အခြားအပိုအလုပ်တွေကို ရှာဖွေလုပ်ကိုင်ကြည့်ပါ။ လူလွတ်များအချစ်ရေးကံကောင်းနေတာကြောင့် မကြာမီ ချစ်သူရလိမ့်မယ်။ ချစ်သူရည်းစားရှိသူများ …
153/3 Golden Land Building, 3th Floor, Unit D-3,
Soi Mahardlek Luang 1, Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel : 02 652 2688 9
Myanmar Live Facebook Page
Copyright © 2021 Myanmar Live.